Ividiyo: Isikhokelo sikaMarket kwiPinterest | Martech Zone
Ividiyo: Isikhokelo sikaMarket kwiPinterest
NgoLwesine, Meyi 10, 2012 NgoMgqibelo, nge-4 kaFebruwari ngo-2017 Douglas Karr
Ndiyayithanda i-infographics, ke xa ndibona ividiyo enkulu ye-infographic ndiye ndiphume ngakumbi. Twilley iyaqhubeka nokukhula kwindawo yokwabelana noluntu ngenxa yemiboniso yayo yobuhle, ukwabelana ngokulula kunye nokusetyenziswa ngokulula. Sigcina i Amanani entengiso Ibhodi apho ithandwa kakhulu kwaye ifumana ukugcwala kwabantu abaninzi kwindawo yethu. Ngamanye amaxesha, iPinterest yenye yezona zethu zibhekisa kakhulu kwizithuthi. Iinkampani zithathele ingqalelo kwaye zisebenzisa iPinterest ukwandisa ukufikelela kwazo.
Kudos ukuya Intengiso ye-MDG kwividiyo emnandi ye-infographic.
tags: khokelaIsikhokelo kwi-pinterestTwilleyIsikhokelo sepinterestividiyo ye-pinterest
Douglas Karr Thursday, May 10, 2012 Saturday, February 4, 2017
Umxholo, umbono kunye nokwabelana ngobuyatha
Umboniso bhanya-bhanya: Izicwangciso-qhinga zokuKhangela zaseKhaya zezona ziPhambili kwiiBrand ezinkulu